Nolosha adeegga ee giraanta xidhidda-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd
Nolosha adeegga giraanta xidhitaanka
Waqtiga: 2021-12-24 Hits: 4
Waxa jira xidhiidho badan oo saameeya shaabadda, sida xoog aan sinnayn, iyo cadaadis joogto ah. Marka loo eego habka loo rakibo giraanta xidhitaanka, rakibidda siyaabo kala duwan sida godadka concave-convex flat
kala duwan, taas oo ay u badan tahay in ay sababto xoog aan sinnayn iyo leexashada xarunta xoogga.
Haddii dhinac uu culus yahay kan kalena uu fudayd yahay, waa qallafsanaanta joogtada ah ee cadaadis ay keento dib-u-dhaca xoogga muddada dheer, taas oo ka sii daran. Marka giraanta wax lagu xidho mar kale la saaro, waxa laga yaabaa in ay qudhuntay. Goorma
rakibidda giraanta xirmada, waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo dheellitirka iyo isku-dhafka isku midka ah ee xoogga.
Waxa kale oo jira sababo badan: qaar ka mid ah alaabooyinka silikoonku waxay leeyihiin nolol adeeg oo kala duwan iyadoo loo eegayo jawiga dibadda iyo guryaha kala duwan, cadaadiska shaqada, iwm.; mid kale waa in marka la eego adkeysiga kala duwan ee walxaha,
waxaa jira sababo badan oo keeni kara in la xidho. Nolosha goobaabintu way sii yaraanaysaa.
Xiga: Qalabka caadiga ah iyo baaxadda codsiga O-rings